I-TecnoVeritas' I-Fuel Changeover System - iHielscher Ultrasound Technology
Ngenxa yamanani okushisa amafutha kanye nemithetho emisha yokukhishwa kwezemvelo, ubuchwepheshe obusha buyadingeka ukuze kusetshenziswe imikhumbi ngendlela efanele.
I-TecnoVeritas’ I-Fuel Changeover System isebenza ngokusebenzisa uhlelo lokulawula oluhlakaniphile olwenza ngokuzenzakalelayo ukuxuba phakathi kokubili okushicilelwe okuphezulu nesiphansi kokuqukethwe kwesulfure ngokwezinto ezifunayo zesulfure (<1%).
I-Fuel Changeover System ikunika imali futhi ikusiza ukuba ugcwalise imithethonqubo yemvelo!
Isidingo Sokuhlelwa Kwe-Fuel System
Ukusetshenziswa kwamafutha kuyomunye wezindleko zokusebenza komkhumbi omkhulu, futhi kulindeleke ukuthi lezi zindleko ziqhubeke nokukhula esikhathini esizayo esiseduze ngenxa ukwanda kwamanani kagesi ngakwesinye isandla kanye nemvelo entsha imithethonqubo yokukhishwa ngakolunye uhlangothi.
Imithetho entsha ye-IMO yemvelo sitshele ukuthi ukukhishwa kwe-sulfur oxide (SOx) kumele kulawulwe ngaphakathi kwe-IMO Izindawo Zokulawula Ukuthunyelwa (ECAs) ngokusebenzisa ukusetshenziswa isibabule esincane uphethiloli, ngakho-ke kubiza kakhulu.
Ukuze kuqinisekiswe ukulandelwa kwemvelo, i-Marine Gas Oil (MGO) isetshenziswa ngaphakathi ngaphakathi kwe-ECAs esikhundleni se-Heavy Fuel Oil (HFO) ngenxa ye-sulfur yayo engezansi ekhulisa ngakho izindleko zikagesi eziphelele ngenxa yamanani aphezulu e-MGO.
Njengoba izindleko zikafutha ziqhubeka zikhuphuka, kunjalo nesidingo sokuphishekela okuphakeme Ukulondoloza amafutha. Eyakhelwe ukubhekana nalesi simo, i-Fuel Changeover System (FCS) ihlinzeka ngemali enkulu yokugcina amafutha ngenkathi isabela emigodini yokukhishwa kwe-sulfur IMO ngokuhlakanipha ngokuqhuba ukuxuba okufanelekile kwe-HFO noMGO ohlelweni lokunikezwa kwamapetroli ukugcina amazinga esibabule ngaphansi kwemingcele yomthetho.
Ngakho-ke i-HFO-MDO / MGO ingxube ye-fuel ibe yindlela engabizi futhi engokwemvelo yokusetshenziswa ngaphakathi kwe-ECAs yamanje neyesikhathi esizayo ekhethiwe.
I-Fuel Changeover System
I-FCS ifaka i i-homogenizer ye-ultrasound ukunciphisa izinhlayiya ezinkulu ezinjenge-asphalten kuya esilinganisweni esifanele ukuvimbela umonakalo wokushisa izingxenye zesistimu, nokuqinisekisa ngisho ukushisa okungcono. Ukuhlaziywa kwamafutha okuhambisana nophethiloli kuqhutshwa ngaphambi kokusebenza okuxhunyiwe ku-intanethi ukuqinisekisa ukuthi izinkinga ezingavumelani nokungalingani kanye nokubunjwa kwe-sludge okwenzekile akukenzeki ngesikhathi senqubo yokuxuba inthanethi.
I-Ultrasonic Blending & Ukuhlakazeka
Hielscher's industrial ultrasonic imishini yenza ngokuhlanganiswa okuvelele kokusebenza futhi iyanciphisa izinhlayiya zibe usayizi we-nano. Lokhu kusho ukuthi i I-homogenizer ye-ultrasonic ihlanganiswe ku-Fuel Changeover System iphula izinhlayiya ezinjenge-asphaltenes kuze kube yi-nano-size futhi zihlakazeke ngokuzenzekelayo. Ngakho-ke, uphethiloli uphuthukisiwe kakhulu okuholela kuwo kangcono futhi ukuhlanza ukushisa! (Bheka izithombe ezincane ze-ultrasonically zahlakazeka njenge-asphaltene izinhlayiya ngezansi.)
Ngemuva kokubeletha, izinhlayiya ze-asphaltene zinciphisa zibe yi-nano-size futhi zisatshalaliswa ngendlela efanayo
Amandla okulondoloza angabalwa ukusetshenziswa komxube we-HFO wama-20% (3.5% okuqukethwe kwesulfure) kanye no-80% MGO ngendlela yokuthi okuqukethwe okufakwe esibabule kuhlale kungaphansi kwe-1%:
Ukucabanga ukuthi umkhumbi obizwa nge-HFO u-3 ton / h kanye ne-fuel price ye-HFO 380 cSt @ 50 ° C kanye ne-MDO ka-630 $ / MT kanye no-1020 $ / MT ngokulandelana, ukugcinwa kuzoba ngu-$ 230 ngehora.
Ngomsebenzi wamahora angu-24 ukugcinwa kuzoba ngu-5600 $ ngosuku!
kuncishisiwe Ukubuyisela Isikhathi saso zombili izitsha ezincane nezinkulu. Ukuqinisekiswa kokuhambisana kwemvelo ngaphakathi kwe-ECAs amanzi.
Isethi ephelele yokunikezwa, i-Fuel & I-Lab Lefutha, Ultrasonic Blender kanye nohlelo olusemthethweni lokungena.
Ukufaka okusheshayo nokulula.
Umklamo omncane, omncane futhi ohlangene.
Ukusebenza okulula futhi okuphephile.
Isikrini sokuthinta somsebenzisi sinikeza ukulawula okugcwele kwesistimu. Isheke lokuhambisana phakathi kwamafutha we-opharetha ngaphambi kokusebenza.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-TecnoVeritas’ I-Fuel Changeover System, sicela uchofoze lapha ukuze uqhubeke ku-TecnoVeritas’ Ikhasi lasekhaya!
ifoni: +35 1261 819 819
I-UIP2000hdT – 2kW iprosesa ye-ultrasonic njengoba isetshenziselwa izinhlelo ze-TecnoVeritas